देउवा प्रधानमन्त्री बनेको २ नबित्दै विप्लवले किन भेट प्रच'ण्डलाई ? यस्तो छ रह'स्य (भिडियो हेर्नुहोस) - Public 24Khabar
Home News देउवा प्रधानमन्त्री बनेको २ नबित्दै विप्लवले किन भेट प्रच’ण्डलाई ? यस्तो छ...
देउवा प्रधानमन्त्री बनेको २ नबित्दै विप्लवले किन भेट प्रच’ण्डलाई ? यस्तो छ रह’स्य (भिडियो हेर्नुहोस)
नेपालका लागि नवनियुक्त अष्ट्रेलियाली राजदूत फेलोसिटी वोल्क र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। बिहीबार बिहान भेटका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नवनियुक्त राजदूत वोल्कलाई स्वागत गरे।
अध्यक्षले अष्ट्रेलियासँग नेपालको सम्बन्ध धेरै पुरानो रहेको उल्लेख गर्दै नेपालका लागि पुर्‍याउँदै आएको सहयोग र सद्भावप्रति अष्ट्रेलिया र त्यहाँका जनतामा कृतज्ञता प्रकट गरे।
सो अवसरमा अध्यक्षले राजदूत वोल्कको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे। भेटवार्ता राजदूत वोल्कले नेपाल र नेपालीलाई अष्ट्रेलियाली जनताले प्यारो मान्ने बताइन्। उनले आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन सहयोगको अपेक्षा पनि गरिन्।
Previous articleअदालतभित्रै महिला कर्मचारी मृत फेला परेको घटनामा प्रहरी नै संलग्न ? पक्राउ परे यि असई
Next articleकाठमाडौं अत्याधिक बर्षापछि उर्लियो खोला: ठाउँ ठाउँमा त’नाब | चोभारमा झनै ड’र लाग्दो हेर्नुस (भिडियो हेर्नुहोस)